(၄) မိဿဟာရယဇ် (Peace or Fellowship Offering) - သင်ခန်းစာ (၁၄)
နွားကို မိဿဟာယယဇ် ပြုလိုလျှင်၊ အပြစ်မပါသော အထီး အမ တကောင်ကောင်ကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဆက်ရမည်။ ပူဇော်သော နွား၏ခေါင်းပေါ်မှာ မိမိလက်ကို တင်၍၊ ပရိသတ်စည်ဝေးရာ တဲတော်တံခါးနားမှာ သတ် ပြီးလျှင်၊ အာရုန်၏သားယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် အသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ ပတ်လည် ဖြန်းရမည်။ အအူကို ဖုံးသောဆီဥ၊ အအူနှင့်ဆိုင်သမျှသော ဆီဥ၊ ခါးအတွင်းနား၌ ရှိသော ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့် ကျောက်ကပ် ဆီဥ၊ ကျောက်ကပ်နှင့်တကွ အသည်းပေါ်၌ရှိသော အမြေးတို့ ကို မိတ်သဟာယယဇ်ကောင်ထဲကယူ၍ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသော ပူဇော်သက္ကာကိုဆက်ပြီးမှ၊ အာရုန်၏သားတို့သည် ယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ ရှိသော ထင်းမီးပေါ်မှာ တင်သော ယဇ်ကောင်နှင့်အတူမီးရှို့ရမည်။ ထာဝရဘုရား အားမီးဖြင့် ဆက်ကပ်၍ မွေးကြိုင်သော ပူဇော်သက္ကာ ဖြစ်သတည်း။(၀တ် ၃း၁-၅)၊
မိဿဟာယယဇ် ပူဇော်သောအခါ အသွေး၊ ၀မ်းတွင်းဆီနှင့်ကျောက်ကပ်နှစ်ခုသာ ဘုရားသခင်အတွက် ပေးရသည်။ ကျန်သော အသားများ ကို ယဇ်ပူဇော်သော သူက စားရသည်။ မိဿဟာယယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် နှစ်မျိုး ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံဘို့ရာ မိဿဟာယ ယဇ်နှင့် သစ္စာပြု ၍ ပူဇော်သော မိဿဟာယယဇ်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုယဇ်နှစ်မျိုး၏ခြားနားချက်မှာ ကျေးဇူးတော် ၀န်ခံဘို့ ရာပူဇော်သော မိဿဟာယယဇ် အသားကို ပူဇော်သော နေ့ခြင်းတွင်စားရမည်။ နံနက်တိုင်အောင်မကြွင်းစေရ၊ (၀တ် ရး၁၅)သစ္စာ ပြှု ယဇ်ပူဇော် သည်ဖြစ်စေ။ ကိုယ် အလိုအလျောက် ပူဇော်သည်ဖြစ်စေ ပူဇော်သောနေ့ ခြင်းတွင်၊ ယဇ် အသားကို စား၍ အကြွင်းကိုလည်း နက်ဖြန်နေ့ စားရမည်။ (၀တ် ရး၁၆)
ဣသရေလလူများသည် မိတ်သဟာယယဇ်ကို ပူဇော် တတ်ကြသည်။ သူတို့ ပူဇော်သော ယဇ်သည် လူနှင့်ဘုရား ရန်သူဖြစ်သောကြာင့် မိတ်သဟာယ ပြုဘို့ လိုကြောင်းကို ဖေါ်ပြသည်။ သူတို့၏ပူဇော်သော ယဇ်သည် အရိပ်ဖြစ်သည်။
လူသည် ဘုရား၏ရန်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရား သခင်နှင့်ပတ်သက်၍ အဘယ်အရာကိုမျှ မကြားချင်။ ဘုရားတရား ပြောလာ လျှင် အိပ်ငိုက်ကြသည်။ ထွက်ပြေးချင်ကြသည်။ လူသည် ဘုရား၏ရန်သူဖြစ်သောကြောင့် ဘုရား၏အကြောင်းကိုလည်း စိတ်မ၀င်စား။ သိလည်းမသိ။ မည်မျှ ပင် ကြားသော်လည်း နားမလည်နိင်။ ပြန်မပြောနိင်။ ဘုရားသခင် နေသော ကောင်းကင်နိုင်ငံသည် အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၊ ပြသနာများ မရှိ ဟုသိရသော်လည်း ကောင်းကင်နိင်ငံကို စွဲလန်းခြင်းမရှိ။ သွားချင်စိတ်မရှိကြ၊ ဘုရားသခင်က စာတန်ပိုင်သော ဤလောကကို မချစ်ဘို့ပြောနေသော်လည်း လောက နှင့်လောက အရာ ကိုသာ လျှင်စွဲလန်းကြသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ရန်ဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိ။ သိလျှင်လည်း ပူပန်သော စိတ်မရှိ။ ဘုရားကိုးကွယ် လျှင်လည်း ဘုရားကျေနပ်ဘို့ ထက် မိမိကျေနပ် ဘို့ အရေး ကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို အပေါ်ယံ ကိုးကွယ်၍ စိတ် နှလုံးမူကား လောကအရာသာလျှင်စွဲလန်းသည်။ ထိုအရာကို သခင်ယေရှုက ဤသို့ ပြောခဲ့သည်-
လျှို့ဝှက်သောသူတို့ဟေရှာယသည် သင်တို့ ကို ရည်မှတ်လျက် ဤလူမူမျိုးသည် နှုတ်နှင့်ငါ့ထံသံသို့ချဉ်းကပ်၍ နှုတ်ခမ်းနှင့် ငါ့ကို ရိုသေကြ၏။ စိတ်နှလုံးမူကား ငါနှင့်ဝေး လှ၏။ လူတို့ စီရင်သော ပညတ်တို့ ကို သွန်သင်၍ နည်းဥပဒေသ ပေးလျက်ပင် ငါ့ကို အချည်းနှီး ကိုးကွယ် ကြ၏ဟု နောက်ဖြစ်လတံ့သောအရာကို လျောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီဟုပြန်၍ မိန့်တော်မူ၏။(မ ၁၅းရ-၉)
လူသည်မည်ကဲ့သို့ ဘုရား၏ရန်သူဖြစ်လာသနည်း။ လူသားများ၏ဘခင် အာဒံကို ဘုရားသခင်က သူ၏မိတ်ဆွေ သူ ၏သား အနေဖြင့် ဖန်ဆင်း ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာ၌-အာဒံအဘ ဘုရားသခင် ပေတည်း-ဟုဆိုသည်(လု ၃း၃ရ)။ သို့ သော် အာဒံသည် ဘုရား၏ရန်သူ စာတန်ကိုထောက်ခံ၍ သူ၏စကားကိုနားထောင်သောကြောင့် ဘုရား၏ရန်သူ ဖြစ်လာသည်။ အာဒံမှ ဆင်းသက်လာသော လူသားတိုင်းလည်း ဘုရား၏ရန်သူများအဖြစ် မွေး ဘွား လာကြသည်။ ထို့ ကြောင့်ဘုရား၏ အလေ့အလာ ကိုနားမလည်ကြ။ စိတ်လည်း မ၀င်စားကြ။
သို့ သော် ဘုရားသခင်သည် လူကို တဖက်သပ်မေတ္တာနှင့်ချစ်သောကြောင့် ရန်ငြိမ်း၍ မိဿဟာယ ဖွဲ့ ဘို့ စီစဉ်သည်။ သို့ သော် ထိုအရာကို လူသားများသိမှာ မဟုတ်သောကြောင့် အရိပ်နေဖြင့် ဣသရေလ လူများကို ကြိုတင် သင်တန်းပေး၍ မိဿဟာယယဇ်ကို ပူဇော် စေခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသင်၏အချိန်စေ့သောအခါ သူ့ သားတော်ယေရှုခရစ်ကို ဤလောကသို့စေလွှတ်၍ လူနှင့်ဘုရား ရန်ငြိမ်းစေဘို့ ရန် သူ့ကိုယ်သူ မိဿဟာယ ယဇ် ကို ပူဇော်စေခဲ့သည်။ ထိုသို့ခရစ်တော် ပူဇော်ခြင်းကြောင့် လူနှင့်ဘုရားသခင်သည် ရန်ငြိမ်း၍ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခွင့် ရကြပြီဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာ၌ ဤသို့တွေ့ရသည်- ရန်သူဖြစ်လျက်ပင် ဘုရားသခင်၏်သားတော် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ငါတို့သည် ဘုရားနှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ ခြင်း ကျေးဇူးတော် ကို ခံရသည် မှန်လျှင်၊ မိဿဟာယဖွဲ့ ပြီးမှ အသက်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက် မည်ဟု သာ၍ မြော်လင့်စရာရှိ၏ (ရော ၅း၁၀)၊
ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့၏ ရန်ကို ငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ စေတော်မူ၏။ ထိုမိဿဟာယတရားကို ဟောရသော အခွင့်အရာ ကို ငါတို့ ၌ အပ်ပေး တော်မူ၏။ ထိုတရားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အထဲ၌ ရှိနေလျက်၊ လောကီသားတို့ ၏ အပြစ်များကို မှတ်တော်မမူ၊ ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့စေတော်မူ၏။ ထို မိဿဟာယ တရားကိုလည်း ငါတို့၌ အပ်ပေးတော်မူ၏။ ထိုကြောင့် ငါတို့ သည် ခရစ်တော်၏ သံတမန်ဖြစ်ကြ၏။ သင်တို့သည် ရန်ငြိမ်း၍ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ကြလော့ ဟု ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ဖြင့် နှိုးဆော် သွေးဆောင် တော်မူသကဲ့သို့၊ ငါတို့သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားဖြစ်၍ သင်တို့ ကို တောင်းပန်သွေးဆောင် ကြ၏။ (၂ ကော ၅း၁၈-၂၀)
ဣသရေလလူများ၏ မိဿဟာယ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် သခင်ယေရှု ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် မသိသောကြောင့် အရိပ်ကို ဆက်လက်၍ လုပ်ချင်ကြသေးသည်။ ခရစ်တော် ပူဇော်ပြီး နောက်နှစ်ပေါင်း လေးဆယ် မလိုအပ်ဘဲ ဆက်လက် ပူဇော်သော ကြောင့် အေဒီ ရ၀ တွင် သူတို့ ပူဇော်သော နေရာ ဗိမာန်တော်ကို ရောမစစ်သားများအား ဖျက်စီးခွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထို့ ကြောင့်သူတို့ သည် ဘုံ ပျောက်သွားကာ မိဿဟာယယဇ် မပူဇော်နိင်ဘဲ ယနေ့ တိုင် အောင်ရှိကြသည်၊
ခရစ်ယာန်ထဲ၌လည်း ထို မိဿဟာယ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို မသိသောသူများစွာ ရှိကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် မသိကြသနည်း ဟူမူကား၊ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို စိတ်မ၀င်စား၊ ဂရုမစိုက်သောကြောင့်၎င်း၊ ပြောမည့်သူ မရှိသောကြောင့်၎င်း၊ မိသဟာယပူဇော်ခြင်းသည် ဣသရေလလူများ၏ထုံးစံဖြစ်၍ ငါတို့နှင့်မဆိုင်ဟု ထင်သောကြောင့်၎င်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခရစ်တော်၏မိသဟာယယဇ် ပူဇော်ခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားနှင့်ရန်ငြိမ်းခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို သမ္မာတရားကို သိခြင်းအားဖြင့် လူသည် ဘုရားနှင့်ရန်ငြိမ်း၍ ငြိမ်သက်ခြင်းအမှန်ကို ရရှိနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။
သင်တို့သည် အထက်က ဝေးလျက် ရှိသော်လည်း ယခုမှာ ယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍ အသွေးတော်အားဖြင့် အနီးသို့ ရောက် ကြပြီ။ အဘယ်သို့နည်း ဟူမူကား၊ ထိုသခင်သည် ငါတို့၏ရန်ငြိမ်းခြင်းအကြောင်း ဖြစ်တော်မူ၏။ ၀ိနည်းအထုံးအဖွဲ့နှင့်စပ်ဆိုင်သော ပညတ်တရားတည်းဟူသော ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း၏ အကြောင်းကို ကိုယ်ခန္ဓာတော်တွင် ပယ်ရှင်းတော်မူသဖြင့်၊ ပိုင်းခြားလျက်ရှိသော စပ်ကြားအုတ်တန်တိုင်း နံရံကို ဖြိုဖျက်၍ လူမျိုးနှစ်စုတို့ကို တစုတည်း ဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ရန်ကိုငြိမ်းစေပြီးလျှင်၊ ကိုယ်တော်၌ ထို လူ နှစ်စုတို့ ကို လူသစ်တဦး တကိုယ်တည်း ဖြစ်စေခြင်းငှါ ပြင်ဆင်၍၊ တလုံးတ၀တည်း ဖြစ်ပြီးသော ထိုလူနှစ်စုတို့ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အားဖြင့် ရန်ကို သတ်ဖြတ်လျက်၊ ဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ စေ မည် အကြောင်းတည်း၊ ထိုခရစ်တော်သည်လည်း ကြွလာ၍၊ ဝေးလျက်ရှိသော သင်တို့အား၎င်း၊ နီးလျက်ရှိသော ငါတို့အား၎င်း၊ ရန်ငြိမ်းခြင်းတရား တည်း ဟူ သော ဧ၀ံဂေလိတရားကို ဟောတော်မူ၏။ ထိုသို့ ခရစ်တော်အားဖြင့် ငါတို့ နှစ်ဦးသည် စိတ် ၀ိညာဉ်တလုံးတ၀တည်း ဖြစ်၍၊ ခမည်းတော်ထံသို့တိုးဝင် ရ မည့် အခွင့်ကို ရကြပြီ။ (ဧ ၂း၁၃-၁၈)
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်အရ ခရစ်တော်၏ပူဇော်ခြင်းသည် ဘုရားနှင့်လူစပ်ကြား ရန်ငြိမ်းခြင်းသာမက လူလူချင်း အကြား၌လည်း ရန်ငြိမ်းခြင်း ဖြစ်စေသည်။ လူသည် ဘုရားနှင့်ရန်ဖြစ်သည် သာမက အခြားလူများနှင့်လည်း ရန်ဖြစ်နေကြသည်။ လူမျိုးမတူသောကြောင့်၎င်း၊ အကျင့် ဓလေ့များ မတူ သောကြောင့်၎င်း၊ ရန်ဖြစ်နေကြသည်။ ယုဒလူများက တပါးအမျိုးသားများကို အပြစ်သားဟုဆိုကာ မပေါင်းဖေါ်ချင်ကြ။ တပါးအမျိုးသားများကလည်း ယုဒလူများ ကို မပေါင်းဖေါ်ချင်ကြ။ သို့ သော်သခင်ယေရှု အသေခံခြင်းအားဖြင့် ရန်ကို ငြိမ်းစေ၍ မိဿဟာယဖွဲ့ နိင်ကြပြီ။ ထို့ ကြောင့် ရှင်ပေါလုက-ယေရှုခရစ်၌ ယုဒလူမရှိ၊ ဟေလသ လူမရှိ၊ ကျွန်မရှိ၊ လူလွတ်မရှိ၊ ယောက်ျားမရှိ၊ မိန်းမ မရှိ၊ ထိုသခင်၌ သင်တို့ အပေါင်းသည် တလုံး တ၀တည်း ဖြစ်ကြ၏။ (ဂလာ၃း၂၈) ဟုဆိုခဲ့သည်၊
သို့သော် ၀မ်းနည်းဘွယ်အရာ အဖြစ်အပျက်မှာ ယခု နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ခရစ်တော်က လူမျိုးများအကြား ပိုင်းခြားလျက်ရှိသော စပ်ကြား အုတ်တန်တိုင်း နံရံကို လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံခြင်းဖြင့် ဖြိုဖျက်၍ လူမျိုးနှစ်စုကို တစုတည်း ဖြစ်စေတော်မူချိန်တွင် လူမျိုးများအကြား အုတ်တန်တိုင်း နံရံများကို တည်ဆောက်နေကြသည်။ လူမျိုးတိုင်းက ဘုရားသခင်ဖြစ်စေလိုသောဆန္ဒထက် မိမိတို့ဆန္ဒကို ဦးစားပေးကြသည်။ လူမျိုးရေး အသင်းတော်များကို တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်ဖြိုဖျက်သော အုတ်တန်တိုင်းနံရံများကို တည်ဆောက်ကြသည် မဟုတ်လော။ လူမျိုးရေး အသင်းတော်များ တည်ဆောက်နေလျှင် အဘယ်ကဲ့သို့ လူမျိုးခြားများကို ပေါင်းဖေါ်နိင်မည်နည်း။ မည်ကဲ့သို့ ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းပြောပြ နိင်မည်နည်း။ မည်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို ဖေါ်ပြနိင်မည်နည်း။
ထိုသမ္မာတရားကို သိ၍ လက်ခံယုံကြည်သောသူတိုင်း လူမျိုးခွဲခြားခြင်း၊ အဆင့်ခွဲခြင်း၊ ရန်ဖြစ်ခြင်းများ မရှိသင့် တော့ချေ။ လူတိုင်း နှင့် သင့်မြတ်စွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ လာနိင်မှာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မဟုတ်၊ လူမျိုးရေးကို ရှေ့ တန်းတင်နေလျှင် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ကျွန်ပ်တို့အားဖြင့် မပြည့်စုံ၊ ခရစ်တော်အသေခံခြင်းသည် အကျိုးမနပ်၊ အချည်းနှီးသာလျှင်ဖြစ်စေသည်။ မည်မျှပင် ကျေနပ်အားရသော်လည်း၊ ကိုယ့်လူမျိုးများလာ ၍ တောင့်တင်းလာသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးပေးခြင်း မခံနိင်ချေ။ ထို့ ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်၊ သခင်ခရစ်တော်၏ အသေခံခြင်း အကျိုးနပ်စေရန် လူမျိုးအလိုက် အသင်းတော်များ မတည်ဆောက်ဘဲ လူမျိုးတိုင်း ပါဝင်နိင်သော အသင်းတော်များ တည်ဆောက်ကြစို့ ။
သင်ခန်းစာ (၁၄) မေးခွန်းများ
၁။ မိဿဟာယယဇ်သည် ဘယ်နှစ်မျိုးခွဲထားသနည်း။……………………. ထိုအရာများမှာ၊………………………..နှင့်………………………. တို့ ဖြစ်သည်။
၂။ မိဿဟာယယဇ်ပူဇော်ရာတွင် ဘုရားသခင်ထံ မည့်သည်အရာများ မီးရှို့ ရသနည်း။……………………………………….။
၃။ ကျန်သောအသားများကို မည်သူက စားရသနည်း။……………………………..။
၄။ လူသည် ဘုရား၏ရန်သူဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါအချက်များအားဖြင့် ထင်ရှားသည်။………………………………………………………..။
၅။ လူသည် ဘုရားသခင်ကို…………..နှင့် ချဉ်းကပ်၍ နှုတ်ခမ်းနှင့်……………….ကြ၏။ စိတ်နှလုံးမူကား ဘုရားနှင့်……………………. ၏။
၆။ လူသည် မည်ကဲ့သို့ ဘုရား၏ရန်သူဖြစ်ရသနည်း။…………………………………………………။
ရ။ ဣသရေလလူများသည် မိဿဟာယယဇ်ပူဇော်ခြင်း၏ရည် ရွယ်ချက်ကို နားလည်ကြပါသလား။…………………………အဘယ်ကြောင့် မိဿဟာယ ယဇ် မပူဇော်ကြတော့သနည်း။………………………………….။
၈။ အဘယ်ကြောင့် ခရစ်ယာန်များ မိဿဟာယယဇ်အကြောင်း နားမလည်ကြသနည်း။………………………………………….။
၉။ မိဿဟာယယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် မည်သို့ ပြည့်စုံသနည်း။……………………………………………..။
၁၀။ မိဿဟာယယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် ဘုရားနှင့်လူအကြားရန် ငြိမ်းစေသည်သာမက……………………………ကြားလည်းရန်ငြိမ်းစေ သည်။
၁၁။ လူမျိုးရေးဦးစားပေးသော အသင်းတော်များသည် ရှိသင့်သလော။ ………………………………………။